ကြည်ကြည်ရဲ့ဒိုင်ယာရီ: ကျွန်မနှင့်ခရီး ........ Kurashiki ဆိုတဲ့ အနုပညာမြို့ကလေး
ကျွန်မနှင့်ခရီး ........ Kurashiki ဆိုတဲ့ အနုပညာမြို့ကလေး
ဒီတစ်ခါတော့ သွားခဲ့ဘူးတဲ့ ခရီးလေးတွေထဲ က နှစ်သက်မိ
တဲ့ KURASHIKI ဆိုတဲ့ မြို့လေးအကြောင်း မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။ မြို့ပြရဲ့ မွန်းကျပ်တဲ့ အရိပ်၊ ပြည်စုံမှု့. ပေါများမှု့ ဆိုတဲ့ citylife ကိုနှစ်သက်လွန်းလို့ကျွန်မရဲ့ အားလပ်ရက်တွေကို အတော်များများ တိုကျို ကို မဖြစ်မနေသွားတတ်ပါတယ်။ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကတော့ ပြောတယ် ဂျပန်က ဘယ်သွားသွားအတူတူပဲ။ ကုန်တိုက်တွေ ကလည်းအတူတူ ပစ္စည်းတွေ ကလည်း အတူတူ ဘယ်နေရာမဆို ငါးပြတိုက်ရှိတယ်။ တာဝါ ရှိတယ်။ တောင်ကမြောက်အကုန်တူတူပဲဆိုတော့ လည်း ဟုတ်တာပဲပေါ့ ။ ဒါပေမယ့် ဒီမြို့ လေးကိုရောက်သွားတဲ့ အချိန်မှာတော့ ကျွန်မရဲ့ အချိန်နာရီ တစ်ခု ရပ်နေတယ်။ အချိန်ကို ရပ်များထားသလား လို့ ထင်ရလောက်အောင်ကို မြို့က ငြိမ်သက် အေးချမ်း နှေးကွေးစွာ သက်ဝင်လှုပ်ရှားနေပါတယ်။
KURASHIKI ဆိုတဲ့ မြို့ လေးဟာ ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ တောင်ပိုင်းဘက် HONSHU ကျွန်းမကြီး ပေါ်မှာပဲ တည်ရှိတဲ့
မက်မွန်သီး နာမည်ကြီးရာ OKAYAMA ပြည်နယ် မှာရှိပါတယ်။ ကျိုတိုက နေ ကျည်ဆံရထားစီးမယ် ဆိုရင် ၁ နာရီ စီးပီးရင် OKAYAMA ရဲ့ SHINKURASHIKI ကိုရောက်ပါမယ်။ကျည်ဆံရထားစရိတ်ကလည်း ခရီးတစ်ခုကို ယန်း၇ထောင် ကျော်ပဲ ပေးရပါမယ်။
SHIN KURASHIKI ကနေ KURASHIKI မြို့ ထဲကို ရိုးရိုးရထားနဲ့ သွားမယ်ဆိုလည်း ၁၀ မိနစ်နီးပါးလောက်ပါပ။ဲ . မနှစ်က ၉ လပိုင်း မှာသွားထားတော့ ဘလော့လည်းမလုပ်သေးတော့ အဲ့ဒါတွေ မမှတ်ထားမှိဘူး ။
မြို့လေးက အစိုးရအဆောက်အဦးတွေ က လွဲရင် အတော်များများက ရှေးတုန်းက ဂျပန် အဆောက်အဦး ပုံစံလေးတွေ အတော်ကို ကျန်နေပါသေးတယ်။ လမ်းမကြီးကလွဲရင် လမ်းကလေးတွေက ကျဉ်းပါတယ်။
ဘူတာကြီးရယ် ဘူတာလမ်းမကြီးပေါ်က နိုက်ကလပ် ၃၊ ၄ခုလောက် ရယ် နိုက်ကလပ်ကိုလာကြတဲ့ လူငယ်တွေရဲ့ကြောင့်သာ အော်ဒီမြို့ မှာ လူငယ်တွေလည်း ရှိပါလား။ ခေတ်မှီပါလားလို့ သတ်မှတ်
လိုက်ရတယ်။ မြို့ ရဲ့ ဘူတာ ရှေ့ကပန်ူးခြံကလည်း အနုပညာဆန်ပါတယ်။
မြို့ခံလူတွေ ဘာလုပ်ကြလည်း????? အများစုက လက်မှု့
အနုပညာလုပ်ကိုင်ကြတဲ့ သူများသလိုပါပဲ .ဘယ်နေရာကြည့်ကြည့် ဂျပန်လက်မှု့ ပစ္စည်းဆိုင်တွေ နောက် တွင်းထွက်ကျောက်နဲ့ ပြုလုပ်ထားတဲ့ လက်လုပ် ACCESSORY ဆိုင်လေးတွေ အတော်ကိုများတယ်။ နောက် အသေးစားဂျင်း အ၀တ်အထည် လုပ်ငန်းလေးတွေ ကိုတွေ့ ရတယ်။
မြို့ ထဲမှာပဲ စီးဆင်းနေတာက မကျယ်တဲ့ ချောင်းကလေး ချောင်းကလေးထဲမှာ ကတို့ လှေငယ်လေးတစ်စီး၂ စီးလောက်က စုန်ချီဆန်ချီ ဧည့်သည်တွေ စီးလို့ရအောင် လှော်ခတ်ပေးတယ်။ ချောင်းကမ်းပါးပေါ်မှာတော့ ကိုယ်တိုင်လုပ်ပီးရောင်းနေကြတဲ့ နားဆွဲ ဆွဲသီး လက်ကောက် စတဲ့ ဘော်လိုလို၊ငွေ လိုလို ACCESSORY တွေ ကို မြေကြီးပေါ် မိုးကာစခင်းပြီး လမ်းဘေးဈေးတန်းလေးအနေနဲ့ ရောင်းပါတယ်။
မြို့ နဲ့တော့ အတော်ကို ပနံရလှပါတယ်။
ဒီမြို့ လေးကို အနုပညာကျောင်းတတ်နေကြတဲ့ ဂျပန်လူငယ်လေးတွေ အလည်များကြတယ်
လို့ သိရတယ်။ ရေပူစမ်း ပါတဲ့ ဟိုတယ် တွေရဲ့ 
တည်းခိုခန်းခလေး တွေ ကလည်း အတော်ကို reasonable ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ညကို တစ်ယောက်ကို ယန်း ၄၅၀၀ ကနေ စတဲ့ ဟိုတယ်တွေ အတော်ကြော်ငြာထားတာတွေ့ ခဲ့ရတယ်။
ဒီမြို့ က ဘာနာမည်ကြီးလည်းဆိုတော့ မြို့ ကလေးသေးပေမယ့် အနုပညာပြတိုက် က ၈ ခုကျော်ရှိပါတယ်။
အဲ့ဒီ အနုပညာပြတိုက်ထဲက မှ နာမည်ကြီးတာက OHARA MUSEUM OF ART ပါပဲ။
ပြတိုက်ကို ၁၉၃၀ နှစ်မှ စတင်တည်ထောင်ခဲ့ ပြီး ဥရောပရဲ့ အနုပညာ လက်ရာကို စုစည်းထားသော ပထမဦးဆုံး ပုဂ္ဂလိကပိုင် အနုပညာပြတိုက် လို့ဖ်ာပြထားသလို၊ဂျပန်နာမည်ကျော် ပန်းချီဆရာတွေ ရဲ့ လက်ရာတွေလည်း ရှိပါတယ်။
ဒီပြတိုက်ကို တည်ထောင်ခဲ့သူ OHARA FAMILY ဆိုတာက လည်း
၁၈၀၀အလယ်ပိုင်းလောက်ကနေ စလို့နိုင်ငံခြား
နဲ့ ကူးသန်းကုန်သွယ်ခဲ့ တဲ့ သဌေး လို့သိရပြန်ပါတယ်။ ပရ်ာက အဲ့ ပြတိုက် သွားဆိုလို့သာသွားလိုက်ရတယ်။ အထဲ က MONET တို့ PICASSO၊ ဆို တို့ ရဲ့အော်ရီဂျင်နယ် ပန်းချီကားတွေ ကို ကျွန်မ အသေအချာ မကြည့်ခဲ့ မှိပါဘူး ။ MONET ရဲ့ "ကြာ" ပန်းချီကားတွေ့
ခဲ့တယ်မို့ လား ဆို မှ ဟုတ်ကဲ့ လို့ ပြန်ပြောပီး ဟုတ်သားပဲ နာမည်ကြီး ပန်းချီဆရာတွေ ရဲ့ပန်းချီကားတွေ ကို စုပြီးပြထားတာပဲ လို့ ပြန်သုံးသပ်မှိပါတယ်။ ပြတိုက်ကလည်း ၀င်ကြေးလူကြီး ယန်း၈၀၀။ ပြတိုက်အကျယ်အ၀န်းကတော့ ရှိလှမှ ပေ၁၀၀ ပတ်လည်ပါ။ ပြတိုက်ထဲမှာတော့ အနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့ ၁၈၀၀ကုန်ခါနီး နှစ်တွေနဲ့၁၉၀၀ နှစ်စောပိုင်းတွေ၇ဲ့ ဥရောပရဲ့ နာမည်ကြီး ပန်းချီဆ၇ာတွေရဲ့ နာမည်ကြီး လက်ရာပေါင်း ကား၄၀ နီးပါး ပြသထားပါတယ်။
အဆောက်အဦး အပြင်ဘက်မှာတော့ အမှတ်တရ အရောင်းဆိုင်လေးတွေက ပတ်လည်ဝိုင်းနေပါတယ်။
မင်္ဂလာသတို့သားသတို့ သမီးတွေ့ခဲ့လို့ အပြေးရိုက်ခဲ့သေးတယ်။
ဘာအစားအစာ က နာမည်ကြီးလည်း??????
မွေးမြုရေး ကြက်ကို အဓိကထားပီး စားနေကြတဲ့ ဂျပန်မှာ OKAYAMA ရဲ့ သဘာဝကြက်သား အကင်ဆိုင်လေးတွေ၊ နောက်တစ်ခုကတော့ ကျပ်တိုက်ထားတဲ့ ဆာဒင်း ငါးလိုလိုကို
ပြန်ပီးကင်ထားတာက နာမည်ကြီးပါတယ်။ ဘာမှ မရှိ ဆင်းရဲတဲံ့ ခေတ်တုန်းက အဲ့ဒီ့ငါးကျပ်တိုက်ကို သဘောင်္သားတွေ က စတင်တည်ထွင်ပီး စားခဲ့ တယ်လို့ ဆရာက ညစာမှာ ရှင်းပြပါတယ်။
တစ်ရက် သာ မြို့ ပေါ်လည်ပီး ကျန်တဲ့ရက်တွေက အခြားသောစက်ရုံတွေ သွားလေ့လာခဲ့ကြတာဖြစ်တဲ့ အတွက် ဒီမြို့ လေးရဲ့ အခြားသောအကြောင်းအရာများကို သေချာမရေးပြနိုင်ပါဘူ့း။ ဂျပန်လို နေရာမှာနေမယ်ဆို ဒီလို အေးချမ်းပြီး အနုပညာ လက်ရာတွေနဲ့ထုံမွန်းထားတဲ့ မြို့မှာ့ နေခြင်လိုက်တာ လို့ 
ကိုယ်တိုင် ရေရွတ်မှိခဲ့ သလို နောက်တစ်ကြိမ် ပြန်သွားချင်လိုက်တာဆိုတဲ့ မြို့ လေးတစ်ခု လည်းဖြစ်ပါတယ်။
Posted by ကြည်ကြည် at 10:16 AM
စူးနွယ်လေး January 16, 2011 at 10:21 AM
မြို့လေးက အေးအေးဆေးဆေးလေးနဲ့ ဆွဲဆောင်မှု ရှိပါတယ်:)
မိုးယံ January 16, 2011 at 5:22 PM
အွန်.. သွားတုန်းကတော့ ခေါ်တောင်မခေါ်ဘူး... စိတ်နာ ဒယ်ယယ်ယ်ယ်ရ်
အပြုံးပန်း January 18, 2011 at 4:42 AM
မရိုစ့်စီက ဘလော့ဂ်လင့်တွေ့လို့ လာဖတ်ပါတယ်။
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) January 21, 2011 at 12:11 AM
ယူကလစ်ပင်တွေရဲ့အောက်က ချောင်းကလေးမှာ လှေစီးရတာ အိပ်မက်ဆန်လိုက်မဲ့ဖြစ်ချင်း
ခုလိုလေး တွေ့ခွင့်ရတာကိုဘဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်